faaruqinta wareegyada | Cosmos koobi karayn
Posted in wax aan waxba tarayn . ilbaxnimada
On meeraha dhimashada ee dhallaanka hore isku dayaya in ay sasabtaan oo Cawaysimina idinkoo nidaamsan, taas oo keeni waa aamin, obydlyachivaniya lagama maarmaanka u ah maskaxda iyo Isbadal ku xiga ee nin sida u shaqeeyo biorobota. Si aad u, in “bezmozglыe” waalidka ha ka cabsan in bandhigan ay nabaad farcankaaga da'da hore – waxay bixiyaan buugaagta pre-diyaar u “waxbarashada”. “Ma jiraan wax aan la sameyn karo waa: fadlan isticmaal wax soo saarka ugu dambeeya” – halkan, in qorayaasha ku odhan buugaagta ay shaydaanka.
Ay u diidaan garasho mid ka mid ah waxa ka dhacaya, oo waxaad ka samaysaa jaahwareer ee wareegyada nolosha, Qarni goor wanaagsan u sheeg sheekooyinka sida kuwaas oo aad u adag in la fahmo mabda'a waxtar leh ee hawlgalka ee dunida ka baxsan. malaha, Warkii sida aan ku xiran nolosha qalabka, maxaa yeelay waxa ay ka dhigan tahay qof riyo xaqiiqsan, ama kayihiin caadiga ah. Waxaa la ma laga saaray, in qoraayada sheekooyinka kaliya ma leedahay qalbiga ku jira in uu runta sheego, ama waxaa laga yaabaa in ay ahayd khatar ku ah nolosha, iyo sababtoo ah waxaa jira nolosha kuma.
Si aad u kicin dhalmo ah miyir iyo cuncun joogto ah ku xiga, organisms podrostaet fiiro waxaa ku urursan on xubnaha taranka. Xaaladdan oo kale,, muransan yahay shuruudaha waxbarashada iyo kulmi danta muran. Taas oo markii danbe u keenaysaa in lagu daro lama filaan ah in qoyska iyo soo bixitaanka of addoon kale ee xaaladaha nidaamka.
Haddii addoonkii teori ma doonayaan in ay u hogaansamaynaa duruufaha nidaamka – ka dibna waxaa lagu sakhiray in daaweyn dheeraad ah oo daran. Waa kuwee waa u baabba 'ama burburinta mabaadii'da, ogalaanaya wadamada adoonka si ay u ilaaliyaan stabilnst. Tani waxay guud ahaan waa KGB ah, CRU, FBR (ama hay'adaha sirdoonka gaar ah, diimaha, Ururada u xiran yihiin iyo amarada) Arsenal farsamo oo dhan. Haddii tan iyo bilowgii nolosha dadka ayaa ku dadaalaya hadafyada qaar ka mid ah (lugu daro la heli gaar quruxda mabaadii'da) – wax u dhaw in ay qaangaarnimada waxay bilaabayaan inay la kaashanayo hubka psychotronic iyo hababka kale ee erasure xasuusta baabbi'in. The milkiilayaasha goboleedyada iyo kooxaha waaweyn ee loo tixgeliyaa, in kaliya ay garasho runta ah oo keliya dunida, oo aad sida caadiga ah “marsho taag” in ay nidaamka. Mararka qaarkood waxay noqdaan kuwo ku qanacsanahay, in “geerka” waa xammaalladii fikrado wanaagsan – ka dibna waxaa lagu sakhiray in burburka. A fikrado waxtar leh xaday dhexeeya awood “upstarts”. Markaas ka shaqeeyo baayoloji uga takhalusi, ama caawin ku dhaqaajiyo guri galay ee maskaxda ka jiran. mabda ', dhammaan waddamada ay u jiraan kharash ku fikrado wanaagsan xaday. in, guud ahaan, koobnaan sirta qaranka. Dabcan, in gaadhista is illowsiin kartaa hay'adaha xiran kala duwan, lahaanshaha “aqoon si qarsoodi ah”, kaas oo aad ka abuuri karaan iyo hay'adaha dawladda. All macluumaad waxtar leh, societies xiran ururtay, Waxay ka dhigan tahay “aqoon si qarsoodi ah”, for raasamaal ee ayan iyagu dhammayn xishood “ka badan meydad socdo”.
Haddii sirdoonka iyo “ururka dahsoon” ma awoodi karo in hawlaha u yeellay – Jidka Shaydaanka la Timaadda dhunsanayn kooxdiisa. Kaliya xaalado dhif ah, iyagu ma ay gaarto hadafkaaga. Modern, ka dib bilowga ah ee xaddi badan oo jahawareer, “obolvanivaemomu Duraku” bilaabaan inay masixi xasuusta. Tani waa si loo hubiyo in, in ay leeyihiin “calafka madfac” markii danbe waxaa jiray rabitaan ah inaannu ka aarsanno.
carruurta ka yar, kuwaas oo waa in mar hore ayaa muujiyey xiisaha galmada ka soo horjeeda, hooyooyinka odhan: “bartaan, helaan waxbarasho, iyo “Mudanayaal heli karaa” ka dibna doono”, laakiin marka ay tahay waqti eclaadaan “ka dibna”, iyo in ay u muuqato lahaa, wakhtigii waa inay imanayaan – ka dibna waxaa jira aabbe, walaalkiis, adeer ama awoowe, war qoraal ah oo: “Aad u malaynayso in aan sameeyo ma garanayo, in aad hadda on “Mudanayaal heli karaa” tag? Noqo nin! Qaado wax kasta oo iyaga ka mid ah oo ay leeyihiin carruurta, in ay ku noolaadaan!” strangely, laakiinse meeh “Mudanayaal heli karaa”? Waxaa soo baxday, trick oo dhan, in “Mudanayaal heli karaa” oo dhan, in fahamkooda. halkii nacas ah, aad Dulmi? dagay galay “ciyaarta” waxmatare ahu qaar ka mid ah “Mudanayaal heli karaa”, iyo marka ay timaado waqtiga xisaab – waa, iyo waxba bixin. Sayidka, dadka, mid mid, ku noolaadaan nolol isticmaalka jirin qof… xiisa, Ma waalidiinta aad oggoshahay in kids ay in ay ku noolaadaan iyada oo aan “Mudanayaal heli karaa” oo aan fikirka ku saabsan kuwan “vobshebnyh” rajada? malaha, jawaabta waa iska cadahay: kuwaas oo ku heshiiyaan in ay farcankeeda ka Shaydaanku Jahannamo ilaaliyo? Ka dib markii ilmo kale la tixgelin doono nooca bulshada.
♡ ★ ♥ Naka – Qaybo ♥ ★ ♡
Malaha qaraabada lab ka weyn waxaas oo dhan samayn out of hinaaso, ama waxaa laga yaabaa waxay socda nidaam computer aamuseen. Waxaa la ma laga saaray, nolosha duulaysa, maxaa yeelay,, in carruurta ma beenin karo waalidkiis, ama waalidka aan awoodin in ay caruurtooda runta sheeg. Waa in la ogaadaa, in wakiilada jinsi dhaddig, guud ahaan, ku faraxsan yahay in ay qaataan kulankaan. Oo weliba, hubaal, waa in la qoro xukunkooda, waayo soo daahay: xukumay eryidda kama dambaysta ah ee qaab-dhismeedka kor u qaadida iyo rogo qabanqaabiyayaasha ma waqtiga iyo miyir iyo kuwa fuliya loo baahnayn, oo iyana khadka waqtiyeynta nooca mawduucaan waa la keydsho. runta, takhaluso “bezmozglыh dhaceen bilihii” rush ma mudan tahay, xaaladaha khatarta ah waxaa waxtar leh sida wax nafleyda.
waxa ay u muuqataa, in dunida la Organization si ula kac ah aan la saadaalin karin sida carruurta ku dhasha oo keliya, iyaga neceb iyo carruurtooda rabto shar iyo silica gaar ah. Maskaxda ku hay, in dadka Caalamka halis u leeyihiin in ay dareemaan in ay qaabab kala duwan “saamaynta jinka”, oo aan soo afjaro kaliya saamaynta hypnotic fikirka, oo waxaa la socda noolaha noolaha (ku saabsan) ilaa ay qaan ama wax matare bleaching jirka. Saameynta maanka aan wadatey oo kaliya fikrado ku saabsan galeen qaababka kala duwan ee rabshadaha iyo dhaawac jirka ah maraya, by gacanta ama dadka kale yimid. Tan waxa u sabab xaqiiqda ah, in “barnaamijka jinka” wareegaan meel bannaan oo shuruud la'aan caqabadaha iyo in la abuuro oo dhan cayn kasta oo buuq nolol caafimaad leh.
Saamayn barnaamijyada jinka keenaysaa qaybaha badan ee bulshada si ay hafray: “Ha qalloociya a – waxaa wax laga xumaado ah!” Inkasta oo aan la caddeyn in sharciga gobolka, xumaan waxaa loo arkaa dhaqanka caadiga ah ee wareegyada dowladda. rakibaadda: “Haddii aad markaas ma tihid qalloociya a aad tahay wimp ah oo aad goor hore in aad ka fikirto awood.” – waa aasaaska si loo abuuro ururka horseedka u ah. Tani waa run gaar ahaan meelaha taladoodu hoos koox ka Venatici, iyo sidoo kale noolaha noolaha ku haboon.
All kulan oo uu saftay, jecel yihiin falalka joogtada ahayn galmo iyo rabitaanka in la keeno tirada ilaa xad, Waxay leedahay saldhig taariikheed. sida muuqata, abtirsan a sar sare lahaa fursado gaar ah sino, iyo waqti badan lounged, ku dheehan yahay aan kala sooc lahayn qiyaasey. Sidaas darteed, carruurta dhalatay caadi ah. Haddii aan xisaabta heerka gardarada dago socday gobta sar sare duurjoogta ah – shaki kuma jiro in ay baaris ayaa bacrimiya dumar ah wax soo. Sababo la joogo ma jiro tiro aad u badan ee ku waari qanacsanayn “weed noolaha” la “hiddo bludskim”. Taas oo dhan qoondaynta shaqada ee Dawladda waxaa ugu wanaagsan aduu xilalka hoggaamineed. A, waxaa laga yaabaa in, oo dhan khalad?
xayawaanka yar yar sida jiirka, jiirarka iyo hamsters ugu dhakhso ah nooc, maxaa yeelay, iyagu ma haystaan ​​wax damaanad qaadayaa in nolosha iyo si joogto ah ayaa qarka u noolaansho. Ogolaanayo in ay sooco noloshooda xaday inventory sayidkii ee. Haddii aan ka fiirsan a noocyada yar yar nolosha (sida aadanaha) waxaannu ku tirinnaa karaa, Waxa kale oo ay jecel yihiin iyo mouse waa dulinka on jirka ah ee Planet ah: xadaan kheyraadka dabiiciga ah iyo noolaha, iyo xataa cadeeyo in midba midka kale, in ay leedahay iyaga. Sida hoos u of kaydka dabiiciga ah, yareeyo tirada kaynta, tirada xoolaha iyo xoolaha, iwm. xawaaraha weheshiga “jiirka podplintusnyh” korodhka, cuntada iyo cuntada sii wareer. Ha ku degdegin inaad nooc isagoo siibtey podsazhennym, maxaa yeelay, xataa laanta qabiil dhan ay joojiso in farcanka saddexaad, oo si wadajir ah ula aan awoowe dhiman baxay line of generic oo dhan. Isagoo ka mid ah jidhka oo aad u awoodaan in ay ka fikirin weynaanta ay idiocy u gaar noqon doonaa. Ka dib markii si dirqi ah ka badbaaday “mouse” si degdeg ah u badin oo ha laasto walba, naxdin leh.
Waxay hore u, kuwaas oo go'aansaday in ay noqoto xaga raga dulli ah – leexdo xagga henpecked. The ugu qallafsan si uu u daawado nin weyn, kaas oo xaq kasta “Vaciamadrid” jajuubi iyo “hoos cedhibta” Board of, si ay “surwaal seegay”. Oo waxay la wejigiisa aad u daran oo ka xanaaqsan. Isla mar ahaantaana ay sidoo kale sheeganaya in ay madaxda nidaamka nolosha-taageero. sida muuqata, ka timaado a cretinism horusocod deranged. Haddii xun, kuwaas oo lahaa ugu yaraan qaar ka mid ah macquulsan in fikirka – xaaladda on meerayaasha go'aya lahaa ugu yaraan qaar ka mid ah rajada.
Nin badan ayaa jeexjeexan galay xoog weyn, efektivnost inay dhexda socodka faa'iido badan ee habka-nololeedyada dowladda. All helay wanaagsan wuu baabba'ay in a cibaadaysi nidaamsan ee podkabluchnogo nidaam cibaadada caalamiga ah. Waayo, kuwa xiiseyneyso, ma noqon doonaa adag tahay in la ogaado ciidanka siyaasadda henpecked wadista. Mid ka mid ah dhaqdhaqaaqa yar – i Mir “henpecked”.
Ku dhaco System Zombie bioform, efimerichnuyu nool dhalinyarada ama warwareegi jireen cawaaqibka qaladaad iyaga u gaar ah, afartan sano jir bilaabaan inay ka fekeraan. runta, wax badan oo ka qabaa oo kaliya si aad u hesho xaq ay dabeecad u gaar ah, iyo qaar ka mid ah ayaa isku dayaya si ay u qariyaan dambiyada iyaga u gaar ah. Laakiin waxa ay qaataan iyaga waxaa la jiray afartan sannadood? Haddii kaliya shaqada addoon, maxaa yeelay,, sare lagama yaabo, in ay noqon kartaa ku haboon ujeedooyin kale.
haddii “dhimashada conveyor” iyo “dhunsanayn caalamka goobada” hogaaminayo shaydaan konton sannadood aad awood uma yeelan inuu soo aaso – ah, hubaal, sida oo dhan, aad ka iibsan dryndulet a rayn, in la raaco waxa on “davalok pivot”, iyo nidaamka grassirovat doonaa, in uu yimaado iyo waqtiga si aad u. yaab, laakiin labka rajo badan ku qaataan konton sannadood ah naftiisa si loo hubiyo in xaaladaha raaxo leh si uu u sii joogo, horumarinta, fahmo, warqabaan, bartaan qaar ka mid ah xubno heer lixaad, ka dibna sida goobtii a “quusin galay dhoobo low-soo noqnoqoshada” Raalli ahaanshaha iyo Raaxo, malaha, ka isbedel fiiqan ee gobolka ka mid ah maskaxda oo xiray iyo jireyso Arkaa xaqiiqada. Fulinta barnaamijka virus bulshada, nolosha “ido iyo wan laga badiyay” ku dadaalaysaa in ay soo buuxi.
Dhibaatadu waxa ay ka jiraan doonaa ilaa, ilaa aad dec lahayn iyada on garbaha.
“All raadad erya in ay wax aan waxba tarayn.” Buddha Shakyamuni yiri. Taas macnaheedu waxa weeye, in dhammaan keeni burburka dareen.
March 2013 sano ee kaalendarka Gregorian
ღ ☼ ₪ Oliver Shanti – Garaacday Heart ღ ☼ ₪